Zimbabwe: Govt Terminates Appointment of Honorary Consul in Northern Israel - allAfrica.com
The Zimbabwean government on Monday announced the termination of the appointment of Moshe Itzhak Osdaicher as the country's honorary consul in Northern Israel.
The termination is with effect from February 2021, spokesperson for Zimbabwe's Ministry of Foreign Affairs Constance Chemwayi said in a statement.
"This means that Mr. Osdaicher does not hold any functions, privileges, and immunities attached to this post as expressed in the Vienna Convention on Consular Relations, 1963 and he no longer represents the Government of Zimbabwe in any capacity," Chemwayi said.
Zimbabwe's foreign ministry thanked the Israeli national for his efforts during his tenure as honorary consul and expressed its desire to maintain and strengthen relations between Zimbabwe and Israel.
In August 2020, Osdaicher and Zimbabwe's Honorary Consul in Israel Ronny Levi Musan met Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa in Harare, where they expressed commitment to help boost bilateral and economic ties between the two countries.